Hello Nepal News » हल्यान्ड पक्षले बार्सिलोनासँग राखेका पाँच सर्तहरूको खुलासा : तलबको डिमान्ड सुन्दा चकित !
हल्यान्ड पक्षले बार्सिलोनासँग राखेका पाँच सर्तहरूको खुलासा : तलबको डिमान्ड सुन्दा चकित !
जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्ड तथा नर्वेका युवा गोल मेसिन खेलाडी अर्लिङ हल्यान्ड भित्र्याउन कम्मर कसेर लागेको बार्सिलोनासँग खेलाडीका पक्षले राखेका प्रमुख सर्तहरूको खुलासा भएको छ । स्पेनिस पत्रिका ‘स्पोर्ट’को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित ताजा रिपोर्टअुनसार हल्यान्डका एजेन्ट मिनो राइओला र उनका पिताले राखेका पाँच प्रमुख सर्तहरूको खुलासा भएको हो । जसमा बार्सिलोनाले हल्यान्डलाई भित्र्याउन के–के गर्नुपर्छ भनेर मुख्य रूपमा विभिन्न पाँचवटा सर्त खेलाडीका पक्षले राखेका छन् ।
रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने हल्यान्डका एजेन्टले राखेका कतिपय सर्त निकै ठूला छन् । त्यसमा पनि आर्थिक सर्त त निकै ठूला छन् । एजेन्ट राइओलाले हल्यान्डका लागि क्लब डर्टमुन्डले मागेको ‘सरुवा फी’देखि बार्सिलोनामा हल्यान्डले पाउनुपर्ने प्रतिवर्ष तलबका लागि पनि आफ्ना सर्त राखेका छन् । त्यसैगरी, हल्यान्डका सर्तमा बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी बार्सिलोनामै निरन्तर रहनुपर्ने एक सर्त पनि समावेश छन् ।
सर्त १– हल्यान्डका एजेन्ट राइओलालाई बार्सिलोनलो हल्यान्ड अनुबन्धबापत २० मिलियन युरो कमिसन भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय ऋणमा डुबेको क्लबका लागि यो पैसा निकै महँगो हो । सर्त २– बार्सिलोनाले हल्यान्डका पितालाई पनि २० मिलियन युरो नै कमिसनबापत तिर्नुपर्नेछ । एजेन्ट राइओला र पितालाई गरी कूल ४० मिलियन युरो त कमिसनमै जानेछ । यो निकै ठूलो बजेट हो ।
सर्त ३ – हल्यान्डका लागि प्रतिसिजन ३० मिलियन युरो तलब । जिब्रो टोक्नुपर्ने कुरा त यो छ कि, हल्यान्डका पिता र एजेन्टले हल्यान्डका लागि प्रतिसिजन ३० मिलियन युरो तलबको माग गरेका छन् । २० वर्षका हल्यान्डका लागि यो करिब–करिब तिर्न नसकिने तलबको सर्त हो । अहिले यति तलब खाने खेलाडी बार्सिलोनाकै लिओनल मेस्सी र इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो मात्रै हुन् ।
सर्त ४– एजेन्ट राइओलाले हल्यान्ड अनुबन्धका लागि बार्सिलोनाले डर्टमुन्डलाई कम्तीमा १५० मिलियन युरो सरुवा फी तिर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । केही समयअघि क्लब डर्टमुन्डले हल्यान्डलाई १८० मिलियन युरोभन्दा कम मूल्यमा नबेच्ने बताएको थियो । तर, अहिले डर्टमुन्ड हल्यान्डका लागि १५० मिलियन युरोसम्मको अंकमा तयार हुने देखिएको छ ।
सर्त ५ – हल्यान्डका एजेन्ट र पिताले हल्यान्डलाई भित्र्याउने भए बार्सिलोनाले कप्तान लिओनल मेस्सीलाई पनि निरन्तर बार्सिलोनामै राख्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । यो सिजनपछि मेस्सी पनि बार्सिलोना छाड्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ । तर, नयाँ अध्यक्षमा जोन लापोर्टा आएपछि मेस्सी बार्सिलोनामै रहने सम्भावना बढेको छ ।
🚨🚨 [RAC1 – @gerardromero] | Haaland's father and his agent, Mino Raiola, proposed these figures to Barça if they want to sign the striker:
💰 Raiola – €20M
💰 Haaland's father – €20M
💰 Haaland wages – €30M net
+ the transfer fee [€150M]
+ the continuity of Messi pic.twitter.com/SEUp0UeRpn
प्रकाशित मिति २२ चैत्र २०७७, आईतवार १५:५६